विचार कृष्णचन्द्रसिंह प्रधान January 1, 2009, 12:44 am
म त्यहाँको वातावरणमा एडजस्ट हुन खोज्दै प्रफुल्लित मनले हेर्छु । मलाई न्यानो लाग्छ जाडोयामको झरी पनि । हावाको प्रत्येक थप्पडमा करेन्ट लागेजस्तो उत्तेजित हुन्छु । धुम्मिएको आकाश, बेलायती आकृतिका घरहरू, सफा चिल्ला सडक, बिनाहर्न गुडिरहेका गाडीहरूको अनुशासन, मेट्रो-बसहरूको अविराम आउजाउ, अनि सडकै हिँडिरहेजस्तो हतारहतार मानिसको दौडधुपमा उनीहरूका थुप्रै प्रश्न झुन्डिएको लाग्यो । थुप्रै जिन्दगी अल्झिएका छन् कि कुन्नि, फुत्किएला कि भनेर त्यसलाई समातिराख्नेहरू कोही पनि निदाउँदैनन् । न रात भनेका छन् न दिन, न दुःख मानेका छन्, न असजिलो । यो व्यस्ततामा जीवनको स्वाद लिन पनि कसैलाई फुर्सद छैन । लाग्छ बेलायतमा बस्नेहरू र बेलायतकै मानिस पनि स्वाद नलिईकनै जिन्दगी चपाउँछन् र निल्छन् । यसरी रमाइरहेका नेपाली, अपि|mकाली, एसियाली र स्वयम् अंग्रेजहरूलाई पनि देख्छु बिनाविरोध यान्त्रिकता सकारेर बाँच्ने जीजिविषा नै त्यहाँको जिन्दगी हो, यसैको लागि संघर्ष गर्दै छन् । यही जीजिविषा बोकेर नेपालीहरू बेलायत पुगेका छन् र सस्तो जीवन जिउनलाई महँगो र गह्रुँगो काम पनि र बाँसुरीको मीठो धून लागिदिन्छ, भुवाजत्तिकै हलुङ्गो । यस्तै दिनचर्यामा हुर्किरहेको आपाधापीको बेलायती जिन्दगीमा प्रवेश गर्ने अवसर पाउँछु ।
साहित्यिक वा सांस्कृतिक पत्रपत्रिकाहरू पनि प्रकाशित हुन्छन् । सुरेशजंग शाहको सम्पादनमा नेपाली साहित्य विकास परिषद्बाट 'लालीगुराँस' निस्कँदो रहेछ । कोसेली नेपाली सांस्कृतिक परिवार यूकेले लोक सांस्कृतिक पत्रिका 'कोसेली' निकाल्ने गर्छ र शशि महाजुको सम्पादनमा प्रकाशक अमृत श्रेष्ठले 'मतिना' निकाल्ने गरेका छन् । 'लालीगुराँस' र 'कोसेली' वाषिर्क हुन् भने 'मतिना' त्रैमासिक । यो नेपाल भाषाको पत्रिका हो तापनि नेपाली र अंग्रेजी भाषालाई पनि ठाउँ दिने गरेका छन् । अनि बौद्धिक, खोजीनिधि र कला, संस्कृतिका दृष्टिले पनि अपेक्षाकृत उपयोगी तथा स्तरीय छ 'मतिना' ।
संस्थाको मुखपत्रको रूपमा प्रकाशित हुने वाषिर्क पत्रिकाहरू प्रायः संस्थागत कार्यक्रम, तिनीहरूको गतिविधि अवगत गराउने उद्देश्यका हुन्छन् । साथै केही साहित्यिक लेख, रचनाहरू पनि समावेश गर्ने गरका छन् 'लालीगुराँस' र 'कोसेली' ले । साप्ताहिक खबर र पत्रिकाहरू पनि निस्कन्छन् । त्यहाँका कवि, लेखकहरूको छाप्ने साधन भनेको यिनै र यति नै हुन् । यसैमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि वर्षमा एकपटक निस्कने पत्रिका मासिक वा द्वैमासिक रूपमा निकाल्न सके धेरै उपयोगी हुन्थ्यो । साहित्यको विकासमा पत्रिकाहरूकै ठूलो हात हुन्छ । यसले लेख्न पे्ररित गर्छ भने लेखिरहने निरन्तरता पनि लेखकहरूले यसैबाट हासिल गर्छन् । साहित्यिक वातावरण नै अर्को हुन्छ । लेखेर छापिँदैन भने किन लेख्ने ? केका लागि लेख्ने ? सबैलाई लाग्छ तर खुसीको कुरा हो, यस्तो साधन, उत्साहजनक वातावरणको अभावमा पनि लेखिरहने केही साधक छन्, उनीहरूका प्रकाशित पुस्तक पनि छन् । यिनीहरूमा 'सीमाहीन विम्बहरू' का कविता उच्च कोटिका छन् । त्यस्तै उत्कृष्ट लाग्यो जया राईको 'डम्बरी' कथा सँगालो ।